Madaxweynihii hore ee Zambia Kenneth Kaunda oo la dhigey isbitaal - Jowhar somali news leader
By Mahad	 On Jun 14, 2021
Madaxweynihii hore ee Zambia Kenneth Kaunda ayaa lagu daweynayaa xanuun aan la shaacin oo ka jira isbitaal militari oo ku yaal caasimada Lusaka.
97-jirkan ayaa xukumay Zambia laga soo bilaabo 1964, markii uu dalku xorriyadda ka qaatay Ingiriiska illaa 1991.
Kaaliyihiisa dhanka maamulka Rodrick Ngolo ayaa bayaan uu soo saaray maanta oo isniin ah ku sheegay in Kaunda uu dareemay caafimaad daro isla markaana la dhigay xarunta caafimaadka ee Maina Soko ee ku taal magaalada Lusaka.
“Mudane Dr. Kaunda wuxuu ka codsanayaa dhamaan dadka reer Zambia iyo beesha caalamkaba inay u duceeyaan maadaama kooxda caafimaadka ay sameynayaan wax walba oo lagu hubinayo inuu soo reysto,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Inkasta oo qoraalka kooban uusan cadeynin xanuunka Kaunda, hadana Zambia waxaa ku soo batay kiisaska cudurka COVID-19.
Intii uu xukunka hayey, Kaunda waxa uu Zambia ka dhigey xarun kooxaha gumeysi diidka ah ee u dagaallama sidii loo soo afjari lahaa xukunkii caddaankii tirada yaraa ee ka jirey dalalka Koonfurta Afrika, oo ay ka mid yihiin Namibia, South Africa iyo Zimbabwe. Kaunda ayaa u oggolaaday ururada hubeysan inay dalkiisa ka sameystaan saldhigyada militariga, xeryaha tababarka, xarumaha qaxootiga iyo xafiisyada maamulkaba.
Kaunda waxaa loo yaqaan “KK”, sidoo kale waxaa lagu naaneysi jirey Gandhigii Afrika wuxuu madax ka ahaa xisbigii wadani ee ugu weynaa, bidix-dhexe ee Xarunta Xoriyadda Qaranka ee Midnimada (UNIP).
Kaunda sidoo kale wuxuu u ololeeyay cudurka Aids-ka, isagoo si cad ugu dhawaaqay mid ka mid ah wiilashiisa inuu u dhintay cudurka.
Myanmar’s junta tries deposed leader Aung San Suu Kyi